Thatha i-1 iqoka i-VP Yezokuthengisa Komhlaba Wonke - Izindaba ze-NAB ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - I-NAB Show LIVE
Ikhaya » Izindaba » Thatha i-1 uqoke i-VP Yokuthengisa Komhlaba
CRANBROOK, KENT - Okthoba 7, 2019 - Imethadata yokusakaza nenkampani yokuqopha, Thatha i-1, udale umongameli ophikisayo wendima yokuthengisa yomhlaba wonke ukukhulisa izizinda zamakhasimende abo aphesheya. UClaire Brown unyuselwe kulesi sikhundla esisha ngokushesha, ngemuva kokusebenza enkampanini cishe iminyaka emithathu njengomphathi wezohwebo.
Ukuhamba kuza njengoba i-Thatha i-1 iqala ukukhipha okusanda kwethulwa Thatha i-1 Cloud, ipulatifomu eyenzelwe ukuphepha enziwe inikeze ukugeleza kwevidiyo okungekho emthuthweni kuya enkampanini yamaklayenti emhlabeni wonke, futhi ilandela ezabo Ukunwebeka kwe-US ku-Connecticut ngo-Okthoba 2018.
UBrown wajoyina i-Thatha i-1 ngoJanuwari 2017 ngemuva kwezindima ezedlule ku-BBC Digital, National Geographic Channel, Fox International Channels kanye neRed Bee. Selokhu aqokwa njengomphathi wezentengiso, inkampani inwebise izinsizakalo zayo ngaphezu kokubhaliwe ukuze ifake izincazelo zomsindo, amagama-ncazo kanye nemibhalo engezansi futhi ihambise ngempumelelo inani elikhulu kakhulu lokubhaliwe, imibhalo yokusakaza njengeyona yokusakaza
nokuhumusha embonini yokusakaza emlandweni wale nkampani ngo-Okthoba 2018. Njengoba i-VP yokuthengisa emhlabeni wonke uBrown ezophatha iqembu lokuthengisa laphesheya, ehlukanisa isikhathi sakhe phakathi kwezinkampani ezintathu eziseMelika nehhovisi labo eliyinhloko e-UK. Uzobika kuMphathi we-Thatha i-1, uLouise Tapia, okuthe kuze kube manje, wahola ibhizinisi lenkampani yaseMelika.
"Isipiliyoni sezimboni zikaClaire, ezamabhizinisi nokushintshana kwezentengiso zimenza abe yilungu elikhulu leqembu le-Thatha i-1 futhi izimfanelo ezibalulekile iqhaza lakhe," kusho umphathi we-Take 1, uLouise Tapia. "Nginokholo oluphelele emandleni akhe okuhola ithimba lethu lokuthengisa kwamanye amazwe njengoba siqhubeka nokwandisa izinsizakalo zethu futhi sihlola izimakethe ezintsha zomhlaba."
Bheka ingxoxo kaClaire no IABM e-IBC 2019 lapha.
Thola okuningi ku www.take1.tv
Mayelana Thatha i-1
Thatha i-1 yenza ividiyo ifinyeleleke ngokuvula amandla amagama. Le nkampani ibamba iqhaza ekubhalweni kwemethadatha futhi inikeze okubhaliwe, izinsizakalo zokufinyelela, ukuhumusha, kanye nemibhalo engemuva kokukhiqiza ezinkampanini ezikhiqiza, kuma-studio, abathengisi bendawo kanye namanethiwekhi emhlabeni jikelele. Thatha i-1 ifa yeminyaka eyi-20 embonini yezokusakaza nedumela lokunikezela ngezinsizakalo ezisheshayo, ezithembekile nokunemba okungenakuvinjwa.
Okuthunyelwe kwakamuva okwenziwe ngu-candice_littlecricketpr (bona konke)
Thatha i-1 iqoka uchwepheshe wezimboni, uStephen Stewart, njengo-COO. - Disemba 10, 2019
Thatha i-1 uqoke i-VP Yokuthengisa Komhlaba - Okthoba 7, 2019
izincazelo zomsindo Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe UClaire Brown I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor indawo Ama-spears nama-Arrows umbhalo we-subtitling, i-Digital Nirvana, ukuqapha imidiya, i-IBC Thatha i-1 Transcript I-Ultra HD Forum Umlingisi wevidiyo	2019-10-07
Ngaphambilini: IMediaKind iqoka u-Allen Broome njengeChief Chief Technology Officer
Olandelayo: UJoanne Rourke kaDelxe Toronto Usiza Izithameli Ze-Immerse “Esihlahleni Eside”